Mombamomba ny orinasa - Newsway Valve Co., Ltd.
Momba ny Valin'ny Gazety
Newsway Valve CO., LTD dia mpanamboatra valves indostrialy matihanina sy mpanondrana mihoatra ny 20 taona, ary manana atrikasa mitafo 20 000㎡. Mifantoka amin'ny famolavolana, famolavolana, fanamboarana izahay. Newsway Valve dia mifanaraka tanteraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena momba ny kalitao ISO9001 ho an'ny famokarana. Ny vokatray dia mitazona rafitra famolavolana fanampiana amin'ny alàlan'ny solosaina sy fitaovana informatika be pitsiny amin'ny famokarana, fanodinana ary fanandramana. Manana ny ekipan'ny maso izahay mba hifehezana tsara ny kalitaon'ny valves, ny ekipa mpanara-maso anay dia manara-maso ny valva hatramin'ny alàlan'ny fanodinana voalohany ka hatramin'ny fonosana farany, manara-maso ny fizotrany rehetra amin'ny famokarana. Ary izahay koa dia miara-miasa amin'ny sampana fanaraha-maso fahatelo hanampiana ny mpanjifanay hanara-maso ny valves alohan'ny fandefasana.
Manokana izahay amin'ny valve ball, valves vavahady, valve check, valvelobe globe, valves lolo, plug valves, saringan, valves control. Ny fampiasa indrindra dia WCB / A105, WCC, LCB, CF8 / F304, CF8M / F316, CF3, CF3, F4A, F5A, F11, F22, F51 HASTALLOY, MONEL, ALUMINIY ALLOY sns .. Valve valve from 1/4 inch (8 MM) hatramin'ny 80 santimetatra (2000MM). Ny valvesantsika dia be mpampiasa amin'ny solika sy gazy, fanadiovan-tsolika, simika sy petrochemical, rano sy rano maloto, fitsaboana rano, harena ankibon'ny tany, ranomasina, herinaratra, indostrian'ny pulp ary taratasy, Cryogenics, upstream.
Tombony sy tanjona
Newsway Valve dia ankasitrahana fatratra ao an-trano sy any ivelany. Na dia misy fifaninanana mahery vaika aza eo amin'ny tsena amin'izao fotoana izao, ny NEWSWAY VALVE dia mahazo fivoarana maharitra sy mahomby izay tarihin'ny fitsipika fitantanana, izany hoe, tarihin'ny siansa sy teknolojia, antoky ny kalitao, hanaraka ny fahatsoram-po sy kendrena amin'ny serivisy tena tsara .
Izahay dia mikiry amin'ny fikatsahana ny hatsarana, miezaka manangana marika Newsway. Ezahina lehibe hahatratra ny fandrosoana sy ny fampandrosoana iraisana miaraka aminareo rehetra.